သတ်မှတ်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေးနှုန်းထားဖြင့် ကောက်ခံရန်ကာလ တိုးမြှင့်ခြင်း... စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၆၃/၂၀၂၀ အရအီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် WIPO FILE Account လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း... စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်အမှတ် ၆၃/၂၀၂၀ အရအီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် WIPO FILE Account လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် အသိပေးကြေညာခြင်း... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း... Myanmar Tradenet Member ယာယီသက်တမ်းတိုးပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီများ Member ကြေးပြန်လည်ပေးသွင်းရန် အသိပေးကြေငြာချက်... ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သောအနုပညာပစ္စည်းများနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ... ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ကော်ဖီတင်ပို့ မှု ယခင်နှစ်ထက် လျော့နည်းနေ... အခေါက်ရွှေဈေး ၁၃ သိန်းနီးပါး ရောက်ရှိလာ... အခေါက်ရွှေဈေး ၁၃ သိန်းနီးပါး ရောက်ရှိလာ... ပြည် ပဲမျိုးစုံဈေးကွက်တွင် စားတော်ပဲသီးနှံ ဈေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေ...
Page: ../ 1 ... 21 22
Question : Could you please advise Office address to do registration of Myanmar Tradenet? & How about member fees & annual fee? Thank & hope to hear from you soon. You can email to [email protected] Wishing you "Prosperous Myanmar Happy New Year" 27 Apr, 2016
Answer : Myanmar Tradenet Member ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ရံုးခန္းလိပ္စာ - စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ၊ (၂၂၈ x ၂၄၀) ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Member Fees – ၁၃၀၀၀ က်ပ္ သက္တမ္းတိုးေၾကး - Member သက္တမ္းမကုန္မီတစ္ပတ္အလိုတြင္ သက္တမ္းတိုးပါက ၁၁၀၀၀ က်ပ္ Member သက္တမ္းကုန္ၿပီးမွ သက္တမ္းတိုးပါက ၁၃၀၀၀ က်ပ္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္ …..
To post new question!